Muzvare Mukoko vanoda kuripwa naVaMutasa mari inosvika zviuru mazana maviri nemakumi maviri kana kuti $220 000 pamusoro pekupambwa uye kushungurudzva kwavo nevasori mugore ra2008. Mutongi wedare ange ari Amai Nyaradzo Munangat-Manongwa.
Muzvare Mukoko vanoda kuripwa naVaMutasa nekuti ndivo vakanga vachitungamira bazi revasori pamwe chete nevamwe vanosanganisira Brigadier Asher Walter Tapfumaneyi na Chief Superintendent Peter Magwenzi.
Asi magweta evatatu ava anga achiramba kuti vatongwe vari vanhu vakazvimirira voga sezvo mhosva yavari kupomerwa vakaipara vakamirira hurumende.
Asi izvi zvarambwa nedare reHigh court. Muzvare Mukoko vanoti vari kufara zvikuru nemutongo uyu.